Wɔka kyerɛɛ Abraham sɛ ɔmfa Isak mmɔ afɔre (1-19)
Aman nyinaa nhyira gyina Abraham aseni so (15-18)
Rebeka abusua (20-24)
22 Akyiri yi, nokware Nyankopɔn no sɔɔ Abraham hwɛe.+ Ɔbɔɔ ne din frɛɛ no sɛ: “Abraham!” Na ogyee so sɛ: “Mini!” 2 Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Mesrɛ wo, fa wo ba koro a wodɔ no,+ Isak,+ kɔ Moria+ asaase so kɔbɔ ɔhyew afɔre wɔ mmepɔw no baako a mɛkyerɛ wo so.” 3 Enti Abraham sɔree anɔpatutuutu hyehyɛɛ n’afurum, na ɔfaa ne nkoa baanu ne ne ba Isak kaa ne ho. Ɔpaapaee anyina a ɔde bɛbɔ ɔhyew afɔre no, na osiim kɔɔ faako a nokware Nyankopɔn no kyerɛɛ no no. 4 Ɛda a ɛto so abiɛsa no, Abraham maa n’ani so, na ohuu beae no wɔ akyirikyiri. 5 Afei Abraham ka kyerɛɛ ne nkoa no sɛ: “Mo ne afurum no ntwɛn wɔ ha, na me ne abofra no rekɔ hɔ akɔsom na yɛasan aba mo nkyɛn.” 6 Ɛnna Abraham de anyina a ɔde bɛsɔ ogya abɔ ɔhyew afɔre no soaa ne ba Isak, na ɔfaa ogya* ne sekan kurae, na wɔn baanu siim kɔe. 7 Afei Isak frɛɛ ne papa Abraham sɛ: “Papa!” Na ogyee so sɛ: “Me ba, mini!” Na ɔkae sɛ: “Ogya ne anyina ni, na oguan a yɛde bɛbɔ ɔhyew afɔre no wɔ he?” 8 Ɛnna Abraham kae sɛ: “Me ba, Onyankopɔn ankasa bɛkyerɛ oguan a yɛde bɛbɔ ɔhyew afɔre no.”+ Na wɔn baanu toaa so kɔe. 9 Bere a wokoduu faako a nokware Nyankopɔn no kyerɛɛ no no, Abraham sii afɔremuka wɔ hɔ, na ɔhyehyɛɛ anyina no wɔ so. Afei ɔkyekyeree ne ba Isak nsa ne ne nan, na ɔde no too anyina no so wɔ afɔremuka no so.+ 10 Afei Abraham teɛɛ ne nsa twee sekan no sɛ ɔrebekum ne ba no.+ 11 Ɛnna Yehowa bɔfo fi soro frɛɛ no sɛ: “Abraham, Abraham!” Na ogyee so sɛ: “Mini!” 12 Na ɔkae sɛ: “Mfa wo nsa nka abofra no; nyɛ no hwee. Afei na mahu sɛ wusuro Onyankopɔn, efisɛ woamfa wo ba koro no ankame me.”+ 13 Ɛnna Abraham maa n’ani so hwɛɛ ne ntentenso, na ohuu odwennini bi a ne mmɛn aka ɔdɔtɔ* mu. Enti Abraham koyii no de no sii ne ba no ananmu bɔɔ ɔhyew afɔre. 14 Na Abraham frɛɛ hɔ Yehowa-Yire.* Eyi nti na nnɛ yi nyinaa wɔka sɛ: “Yehowa bɛkyerɛ wɔ ne bepɔw so”+ no. 15 Yehowa bɔfo fi soro frɛɛ Abraham ne mprenu so, 16 na ɔkae sɛ: “Yehowa asɛm ni: ‘Esiane sɛ woayɛ eyi na woamfa wo ba koro no ankame me+ nti, meka me ho ntam sɛ,+ 17 ɔkwan biara so mehyira wo, na ɔkwan biara so mɛma w’aseni* ayɛ bebree te sɛ ɔsoro nsoromma ne mpoano anwea;+ na w’aseni* bɛfa n’atamfo nkurow apon.*+ 18 Ɛnam w’aseni*+ so na asaase so aman nyinaa benya nhyira, efisɛ woatie me nne.’”+ 19 Afei Abraham san baa ne nkoa no nkyɛn, na wosiim kɔɔ Beer-Seba;+ na Abraham kɔɔ so tenaa Beer-Seba. 20 Eyinom akyi no, wɔbɛbɔɔ Abraham amanneɛ sɛ: “Hwɛ, Milka nso awo mma ama wo nua Nahor:+ 21 Ne ba panyin Us, ne ne nua Bus, ne Kemuel a ɔyɛ Aram agya, 22 ne Kesed, Haso, Pildas, Yidlaf, ne Betuel.”+ 23 Betuel nso woo Rebeka.+ Mmarima baawɔtwe yi na Milka woo wɔn maa Abraham nua Nahor. 24 Ne mpena* a wɔfrɛ no Reuma no nso woo Teba, Gaham, Tahas, ne Maaka.
^ Ebetumi akyerɛ nnyansramma.
^ Anaa “wura kusuu.”
^ Ɛkyerɛ, “Yehowa Bɛkyerɛ; Yehowa De Bɛma.”
^ Anaa “W’asefo.” Hebri kasa mu no, wɔka no sɛ ade baako, nanso etumi gyina hɔ ma dodow kabea.